AGM | UK | Myanmar Students' Union United Kingdom and Éire
Myanmar Career Expo
Main Hall, Yangon Technological University,
Myanmar Career Expo ဆိုတာဘာလဲ။
ကျောင်းသားတွေ၊ ဘွဲ့ရခါစအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူတွေ အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး စီစဉ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုင်ပြပွဲ။ (မည်သူမဆို အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်သည်)
နယ်ပယ်အသီးသီးက ကျောင်းသားတွေအတွက် နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီ၊ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီကြီးများက ပေးမယ့် အကောင်းဆုံး အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများ။ (ပါဝင်မည့် ကုမ္ပဏီအသေးစိတ်ကို Discussion တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ)
စီးပွားရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ အင်ဂျင်နီယာ အစရှိတဲ့ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ပါဝင်အောင်မြင်နေသူတွေရဲ့ မျှဝေပေးမယ့်အကြံပြုချက်များ။
ကျောင်းပြီးခါနီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်၊ အလုပ်သင်အခွင့်လှမ်းတွေရှာချင်တယ်ဆိုရင်၊ အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးအကြံဉာဏ်တွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဇူလိုင် ၂၈ရက်, စနေနေ့မှာ YTU main building က Myanmar Career Expo ကိုလာခဲ့လိုက်ပါ။
Event ကိုလည်း Going လုပ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
If you are unsure of what to do following graduation or you are looking for placements, come along to the Myanmar Career Expo by MSU-UK, MSU-USA and YTUSU.
On Saturday 28th July, YTU Main Building will open its doors to many international, national, and local firms offeringawide range of opportunities to students graduating this year. From large international companies to various national firms, there will beawhole range of jobs on offer, across many different industries, with employers looking to fill their vacancies.
With numerous firms at the forefront of the economy, talk shows by our successful predecessors, panel discussions with professionals from various fields,amotivational talk from Burmese business tycoon and many more to come, this is THE opportunity of the year to pave your future career pathway and to beapart of the global leaders in your industry.